बझाङको तल्कोट गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा छडाखेत–मालिका–दाँतोला सडक खन्ने निर्णय गर्यो । यो कामका लागि जोगगिरी बिष्टको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गरियो । रु.६४ लाख खर्च गरेर सडक खन्ने काम सकियो पनि । यति ठूलो रकम खर्च गरेर उपभोक्ता समितिले कसरी यो सडक खनेछ भनेर बुझ्न हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर सबै कागजात माग्यौं । तल्कोट गाउँपालिकाले सडक निर्माणसँग सम्बन्धित कागजातहरू डिजाइन, इस्टिमेट, उपभोक्ता समितिका निर्णयहरू, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, डोर हाजिरी फारम लगायतका विवरणहरू उपलब्ध गरायो ।
सडक खन्ने काममा संलग्न भएको सूचीमा स्थानीय श्यामबहादुर बिष्टको पनि नाम थियो । उनले ३२ दिन काम गरेर रु.१७ हजार ६०० बुझेको डोर हाजिरी (कसले कति दिन काम गर्यो भनेर राखिएको हस्ताक्षर सहितको विवरण) मा उल्लेख छ । हामीले त्यो कागजात देखाउँदा उनी छक्क परे । बिष्टले भने, “म सडक खन्न गएको छैन, रकम पनि बुझेको छैन । यो सबै नक्कली हो ।”
खोज्दै जाँदा गाउँमा हुँदै नभएका मानिसको नाम समेत राखेर हस्ताक्षर गरेको पनि भेटियो । डोर हाजिरीमा लालबहादुर धामीका छोरा भनेर हरिबहादुर धामीको हस्ताक्षर छ । तर, यो नाम गरेको मान्छे गाउँमै नभएको स्थानीय रमेश बिष्टले बताए । सडक खन्ने काममा संलग्न किशोर धामी, प्रताप धामी लगायत २७ जनाको नाम र हस्ताक्षर डोर हाजिरीमा छ तर ती नाम गरेका मानिस यो गाउँमा कोही पनि छैन ।
छडाखेत–दाँतोला–मालिका सडकमा श्रमिकले काम गरेको भनेर तल्कोट गाउँपालिकामा पेश गरिएको नक्कली डोर हाजिरी फारम । यसमा एक वर्षका बालक उमेश धामी (क्र.सं. १) ले पनि काम गरेर रकम बुझेको देखाइएको छ । बिष्टले भने, “काम सबै डोजरले गरेको हो, डकुमेन्ट मिलाउनलाई श्रीमान्–श्रीमतीको समेत नाम राखेर गाउँपालिकामा पेश गरेका हौं ।” उनले दुई वर्ष काम गर्दा त्यो रकमले कति सडक खनियो भन्ने कुरा बताउन भने सकेनन् । उनले भने, “दुई वर्षमा कति लम्बाइको सडक काटियो भन्ने मैले हिसाब गरेको छैन । यो त नापेरै मात्रै भन्न सकिन्छ ।”
यसपछि हामीले गाउँपालिकाले नै खनेको मालडाँडा मष्टादेखि किदन्नसम्मको सडकका कागजातहरू हेर्यौं । त्यहाँ पनि मानिसले काम गरेको डोर हाजिरी भेटियो । हामीले त्यसमा हस्ताक्षर गरेर पैसा बुझेका भनिएका मानिसहरू खोज्यौं । यो सडकमा पनि ३२ दिन काम गरेको भनेर दिनको रु.५५० को दरले २२४ जनालाई प्रतिव्यक्ति रु.१७ हजार ६०० का दरले भुक्तानी गरेको विवरण गाउँपालिकामा पेश गरेको भेटियो ।
यसपछि हामीले जिल्लाको सबैभन्दा दक्षिणको बुङ्गल नगरपालिकाले कसरी सडक खन्ने काम गरिरहेको छ भनेर अध्ययन गर्यौं । त्यहाँ त डोर हाजिरीको मात्रै होइन, सार्वजनिक सुनुवाईकै नक्कली विवरण बनाएर भुक्तानी लिएको भेटियो ।
बुङ्गल नगरपालिकामा पेश गरिएको विजगडा–कफलसेरी सडकको सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको भनिएको निर्णयमा किर्ते हस्ताक्षर । सार्वजनिक सुनुवाइमा उपस्थिति भएका भनिएका धेरैलाई यस्तो सुनुवाइ गाउँमा कहिले भयो भन्ने पनि जानकारी छैन ।
तीन वर्षको अवधिमा रु.१४ करोड बढी खर्च गरेर १४ वटा सडक निर्माण गरेको बताउने बुङ्गल नगरपालिकाका मेयर धनबहादुर बिष्टले डोर हाजिरी र अन्य विवरणहरू किर्ते गरेको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे । बिष्टले भने, “त्यो विषयमा मलाई थाहा भएन । प्राविधिकहरूले के गरे ? वडा कार्यालयले कसरी सिफारिश गर्यो ? उनीहरूलाई नै थाहा होला ।”
हामीले अध्ययन गरेका तल्कोट, सुर्मा, मष्टा, खप्तडछान्ना, वित्थडचिर र दुर्गाथली गाउँपालिका तथा बुङ्गल नगरपालिकाका सबैजसो सडकमा यो विकृति भेटियो । एकजना डोजर सञ्चालकले भने, “लगभग सबैजसो डोर हाजिरी उपभोक्ता समितिको सहयोगमा मैले नै तयार गरिदिएको हुँ ।”
विभिन्न उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसँग कुराकानी गर्यौं । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रम लगायतका प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गर्यौं । यी कागजात हेर्दा उपभोक्ता समितिका मुख्य पदाधिकारीहरू तथा जनप्रतिनिधिहरू डोजर प्रयोग गरेर श्रमिकले काम गरेको नक्कली कागजात बनाएर लाभ लिन संगठित रूपमै लागेको भेटियो ।
केही दृष्टान्त हेरौं, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खप्तडछान्ना गाउँपालिकाले गडराय गोर्खाली झरना पर्यटकीय सडक निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्यो । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष थिए, हर्क चौहान । रु.३० लाखको यो सडक निर्माणमा सोही गाउँपालिका वडा नं ६ का वडा अध्यक्ष तिलक खड्काको डोजर प्रयोग गरियो ।
महालेखाले तयार गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “प्रमाणित बिल बेगर भुक्तानी दिएको रु.५० लाखको कार्यका सम्बन्धमा छानबिन गरी पेश भएको कागजात अनुसार कार्य नभएको पाइएमा सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।”
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७४/७५ मा पनि यस बारेमा शंका व्यक्त गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ–“एस्काभेटरको भाडा खर्च बराबरकै तेल खर्च लागेको सम्बन्धमा ‘नम्र्स’ अनुसार मिल्ने नमिल्ने यकिन गरी नमिल्ने र बढी भुक्तानी भएको देखिए सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”
यो मामिलाका जानकार एक व्यवसायी भन्छन्, “यस्तो नक्कली कामबाट जनप्रतिनिधि र डोजर सञ्चालक दुवैलाई फाइदा हुन्छ । एकातिर ठूलो नाफा, अर्कोतिर उपभोक्ता समितिले काम गरेको देखिने हुनाले व्यवसायीले कारोबार र आयमा कर समेत तिर्नुपर्दैन भने जनप्रतिनिधिले विकास गरेको देखाएर कमिशन खान पाउँछन् ।” खोज पत्रकारिता केन्द्र
नेमकिपाको किल्ला भत्काउन गठबन्धनको कसरत
समानुपातिक सांसदले पाए प्रमाण पत्र
सरकारसँग किन आक्रोशित बन्यो अमेरिका ?